विविध – Update Nepal
माल्दिभ्स नजिक महासागरमा यस्तो अवस्थामा खस्यो चिनियाँ रकेट (भिडियो सहित ) !
May 10, 2021 adminLeaveaComment on माल्दिभ्स नजिक महासागरमा यस्तो अवस्थामा खस्यो चिनियाँ रकेट (भिडियो सहित ) !
बेइजिङ – चीनको लङ मार्च ५बी रकेटका भग्नावशेष हिन्द महासागरमा आइतबार खसेको चिनियाँ अन्तरिक्ष इन्जिनियरिङ कार्यालयले जनाएको छ । गत अप्रिलमा प्रक्षेपण गरिएको उक्त रकेटले अन्तरिक्षमा चीनको पहिलो स्टेशन बनाउन मद्दत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। कार्यालयका अनुसार चाङ झेङ ५बी नामको रकेट पृथ्वीको वायुमण्डलमा यही मे ९ तारिखको बिहान १० बजेर २९ मिनेटमा पुनः प्रवेश […]
रकेटको ठूलो टुक्रा पृथ्वीमा खस्ने चिन्ता : अमेरिका भन्छ – समुद्रमा खसे हुन्थ्यो !
May 8, 2021 adminLeaveaComment on रकेटको ठूलो टुक्रा पृथ्वीमा खस्ने चिन्ता : अमेरिका भन्छ – समुद्रमा खसे हुन्थ्यो !
बीबीसी – चीनले प्रक्षेपण गरेको एक रकेटको ठूलो टुक्रा पृथ्वीमा खस्ने चिन्ता बढेको छ। रकेटको त्यो टुक्रा पृथ्वीतर्फ अघि बढिरहेको र खस्न सक्ने जोखिम देखिएको दाबी गरिएको छ। तर यसको स्पष्ट जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन। चिनियाँ रकेट लङ मार्च–५बी गत अप्रिल २९ मा चीनको हाइनान टापुबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। त्यसैको ठूलो टुक्रा पृथ्वीमा खस्ने चिन्ता बढेको […]
अढाई अर्बको कम्पनीमा ९,५०० कर्मचारी छन् : तर मालिक भने साइकल चढेरै दैनिकी चलाउँछन् !
May 6, 2021 adminLeaveaComment on अढाई अर्बको कम्पनीमा ९,५०० कर्मचारी छन् : तर मालिक भने साइकल चढेरै दैनिकी चलाउँछन् !
काठमाडौं – “म कार्यालयबाट टाढा बसेर काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तै हुँ,” टाढासम्म देखिएको हरियो धानखेत हेर्दै श्रीधर भेम्बुले भने। श्रीधर र उनका दुई भाइ मिलेर सन् १९९६ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित सिलिकन भ्यालीमा जोहो स्थापना गरे। अहिले सो क्लाउड-आधारित सफ्टवेयर कम्पनीमा ९,५०० कर्मचारी छन् र फोर्ब्स पत्रिकाले उनीहरूको सम्पत्ति अढाई अर्ब रहेको अनुमान गरेको छ। […]
प्रधानमन्त्री निवासमा भूत पसेपछि…!
May 5, 2021 adminLeaveaComment on प्रधानमन्त्री निवासमा भूत पसेपछि…!
काठमाडौं – कुनै पनि देशको लागि त्यो देशको कार्यकारी प्रमुखको निवास अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिने गर्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति हुने देशमा राष्ट्रपति निवास र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने देशमा प्रधानमन्त्री निवासलाई अत्यन्तै महत्वको स्थानको रुपमा लिने गरिन्छ । तर, सेरेमोनियल राजतन्त्र र कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको देश जापानमा भने प्रधानमन्त्री आफ्नो सरकारी निवासमा बस्दैनन् । जापानको सरकारी […]